Ny taxi amin'ny ho avy dia ao anatin'ny ankehitriny (III): myTaxi | Vaovao IPhone
Ny taxi amin'ny ho avy dia ao anatin'ny ankehitriny (III): myTaxi
Rehefa avy niresaka tamin'ny fizarana roa voalohany amin'ity miniseries ity momba ny rindranasa roa izay tsy misy ifandraisany amin'ny taxi mahazatra, dia anjaran'izay te-hanavao ny taxi amin'ny androm-piainany iray manontolo. Ny fampiharana myTaxi Io no valiny tsara indrindra eo amin'ny tontolon'ny taxi amin'ny sisa amin'ny mpanohitra, ary ny tena marina dia tsy ratsy velively. Hodinihintsika ity hahitantsika ny mahatsara sy maharatsy azy amin'ny alàlan'ny fifantohana amin'ny antsipiriany lehibe.
1 Taxi maoderina
Ny fototry ny fampiharana ity dia ny taxi mandritra ny androm-piainany, satria izy ireo no ho fiara hampiasaintsika hivezivezy vantany vao vita ny fifanarahana amin'ny finday. Mikasika ny fizotry ny fitantanana dia, ny zava-drehetra dia mitovy amin'ny fampiharana hafa toa ny Uber na Lyft, ao anatin'izany ny fandoavam-bola amin'ny alàlan'ny finday sy ny fahatsoran'ny fitantanana azy, ny fanekena ho fanampin'ny fandoavana nentim-paharazana ny fahafahan'ny fandoavana trosa roa na carte de debit ary PayPal amin'ny alàlan'ny fampiharana.
Raha ampitahaina amin'ny safidy 'maoderina' toa an'i Uber sy Cabify, ny myTaxi dia manana tombony mety hahaliana ny mpampiasa sasany: amin'ny alàlan'ny taxi-be nentim-paharazana dia afaka mivezivezy ny fiara Làlan'ny taxi-be, zavatra tsy avela fiara fitaterana mpandeha tsy taxi. Midika izany, raha teorika, tonga any amin'ny toerana aleha aloha.
Ny fiasan'ny serivisy amin'ny resaka fotoana en muy Bueno. Any amin'ny tanàn-dehibe dia haingana dia haingana ny fahatongavan'ireo taxi-be ary tsy mila miandry isika, zavatra iray izay ankasitrahana tokoa, na dia tsy maintsy ekena aza fa taorian'ny fampiasana sasany dia nifanena tamina tombatombana momba ny fahatongavana izahay, na dia somary matetika aza ity. amin'ity karazana fampiharana ity.
Ny fiasan'ny Calculator izay mety ho hitantsika eo amin'ny sehatry ny fampiharana dia tena mahaliana ihany koa satria mamela antsika hahazo ny tombana amin'ny vidin'ny dia ary matetika dia somary akaikin'ny zava-misy io, na dia mety miovaova arakaraka ny zava-misy isan'andro aza.
Amin'ny haavon'ny interface tsy misy zavatra toherina, tena marina izany, misy loko madio ary ny fahatsorana tena ilaina amin'ny fampiasana ity karazana ity. Toy izany koa, ny fandidiana amin'ny fotoana rehetra dia tsara indrindra, tsy misy karazana lag ary karazana fanavaozana tsara amin'ny fotoana rehetra raha toa ka manana tambajotra finday na WiFi miasa isika.
Fanamarihana momba ny fisoratana anarana: Afaka manao fisoratana anarana ara-dalàna ianao raha tsy manana trosa fampiroboroboana, na mahazo vola maimaim-poana amin'ny dianao voalohany amin'ny alàlan'ny fanoratana ny kaody "carlos.san57".
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » maro » Ny taxi amin'ny ho avy dia ao anatin'ny ankehitriny (III): myTaxi
Amazon Chime no fifaninanana matotra indrindra ho an'ny Skype
Podcast 8x22: Ny fanantenana dia mitombo amin'ny iPhone 8